SomaliTalk.com » Waraysi: Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka Oslo, Norway
Daabaco | Print | Faafin: SomaliTalk.com: Monday, August 8, 2011 // 2 Jawaabood
Waraysigaan soo socda waxa aan la yeeshay Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway. Doorashada ayaa lasoo afjari doonaa 12-ka bisha september 2011. Haddaba anigoo ah C/risaq Maxamed Xuseen, aqoonyahan degan Sweden, isla markaasna ah qoraa wax ka qora arimaha bulshada ayaan waraysigaan la yeeshay Ubaxa C/qaadir. Ujeedada wareysigu waxaa weeye in guud ahaan dadka soomaaliyeed gaar ahaana dadka soomaaliyeed ee reer Norway si fiican loogu sharaxo barnaamijka siyaasadeed ee ubax C/qaadir. Ubax waxaa ay u sharaxan tahay xisbiga shaqaalaha, waxaana ay kaga jirtaa booska 49 àad. Waraysiga oo meelo badan taabanaayey waxaa uu u dhacay sidatan:
Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka magaalada Oslo ee dalka Norway
Haddba waxaa aan doonayaa inaan maamulka waxbarashada degmada ka dhaadhiciyo in ardaydaas heerkooda luqadeed iyo aqooneedba la dhiso inta aan horey loo sii gudbin. Waxaan aad ugu dadaali doonaa in aan si cilmiyeysan u muujiyo dhibaatada ardaydaas aan kor ku soo sheegay lasoo gudboonaata.Waxaan kaloo ku wacyi gelin doonaa in haddana dabagal lagu sameeyo arinkaas si loo hubiyo in sharciga tacliinta u degan la raacay, si arday walbaa uu xuquuqdiisa u helo. Waxaan kaloo qaybta tacliinta kala hadli doonaa in waalidka soomaaliyeed u baahan yahay warbixin dheeraad ah oo ku saabsan nidaamka iskuulada iyo manhijka dalka u degan maadaama uu yahay mid ka duwan nidaamkii iskuulada ee Soomaaliya. Waxaan kaloo aan doonayaa in aan inagu haddaan soomaali nahay isa siino warbixin ku saabsan iskuulada iyadoo dadkii horey u joogey ee fahmey qaabka iskuulada ay khibradooda la qaybsadaan dadka cusub ee aan weli fahmin nidaamka tacliineed ee dugsiyada Norway. Waxaan ku talo jiraa inaan hay `da isdhexgalka u gudbiyo nidaam aan ugu magic daray “nidaamka kala faa ìideysiga” taas oo macnaheedu yahay in reer horey u deganaa oo soomaali ah uu xiriir iyo wada shaqeyn la yeesho reer cusub oo soomaali ah. Labada reer waa ay kala faa ìideysanaayaan. Waxaana ay isdhaafsanayaan khibrad iyo waayo aragnimo kala duwan.
2 Jawaabood " Waraysi: Ubax C/qaadir oo u sharaxan golaha deegaanka Oslo, Norway "
Tuesday, August 9, 2011 at 12:09 pm
Ardaya gabarsoomaaliyeed aa u rashaxan golasha deegaanka… waa guul.. waxaase isweydiin mudan dadku dal kama maqna marhadeyba xilal ka helayaan Duurka… ama dalalka kale.. gabadhana tusaale ee noo tahay… horay u socda soomaaliya Alle aa u maqane
faarax saciid says:
Monday, August 8, 2011 at 5:59 pm
waan idin salaamay dhamaantiin, bahda somalitalk.com iyo musaraxada golahha deegaanka Oslo. Waa arin aad loogu farxo in gabar soomaaliyeed oo muslimad ah ay u sharaxantahay iney ka mid noqoto baarlamaanka degmada. Waxaan kaloo aan aad iyo aad ula dhacay barnaamijka siyaasadeed ee gabadhu soo bandhigtay. waa mid dhamaystiran. Waxaan qabaa in Ubax ay sharaxda soomaalida Norway wax badan kusoo kordhineyso. Marka walaalaha reer Norway waa inaad gabadha codkiina siisaan. si ay prograamka quruxda badan ee ay soo bandhigatay u hesho fursad ay ku fuliso. Markale Codkiina siiya Ubax C/qadir